Horumarinta Af-Soomaaliga Soomaalilaan Ayaa Dayacday (WQ: Cali Cabdi Coomay) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Horumarinta Af-Soomaaliga Soomaalilaan Ayaa Dayacday (WQ: Cali Cabdi Coomay)
Nin baa laga hayey “Urna loo dhimay ufna odhan kari mayno”. Intii u dhaxaysay 1996 ilaa 2021-kan aynu jirno waa 25 sanno oo ay Soomaalilaan nabad waarta ku jirtay, weli lama hayo intii xukumaadood ee mudadaasi oo jirtay inay maalin ku fikireen horumarinta Afsoomaaliga. Sannad kasta bisha labaad ee Fabarwari 21-keeda waxa la xusaa maalinta qorista Afsoomaaliga, waxa ilaa hadda Hargaysa lagu qabtaa xaflad kooban oo dhawr qof ka dhex tororogta guraan. Hadda Soomaalilaan waa meesha ugu habboon ee Afsoomaaliga lagu horumin karo marka la eego shantii Soomaaliyeed ee dawladnimada ku kala tegay, balse afku ka dhexeeyo. Bishii ugu yaraan saddex buug ama afar buug oo cusub ayaa lagu soo bandhigaa gudaha magaalooyinka Soomaalilaan. Bandhigyada buugaagta ee ka kala dhaca magaalooyinka Soomaalida sida Jabuuti, Muqdisho, Garoowe iyo Jigjiga waxa camira buugaagta laga keeno Soomaalilaan. Fursadaasi ayey xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaalilaan dayaceen inay guddi horumarineed u magacaabaan Soomaalilaan. Waxa ay dayaceen inay ururiyaan dhammaan abwaannada Soomaalilaan iyo qorayaasha oo ay ururo iyo xafiisyo u furaan. Waa taa kolba abwaan ama qoraa caan ah looga gacan haadinaayo Muqdisho, oo markuu warku soo baxo ay qayladu yeedhayso.
TASHAN WEYDEE WAA LAGU TALIN.